धार्मिक पर्यटकीय स्थल ‘माङमालुङ’ कसरी पुग्‍ने ? - Nayabulanda.com
राम योङहाङ २२ मंसिर २०७६, आईतवार ०९:०८ 518 पटक हेरिएको
इलाम : इलाममा रहेका विभिन्न धार्मिक पर्यटकी स्थलहरुमध्ये एक हो माङमालुङ । माङसेबुङ गाउँपालिका वडा नम्बर २ र ६ मा पर्ने माङमालुङ पछिल्लो समय पर्यटकहरुको रोजाइको स्थल बन्ने गरेको छ । इलाम सदरमुकामदेखि करिव १५ कोष पश्चिममा अवस्थित माङमालुङ धार्मिक तथा पर्यटकीय हिसाबले महत्वपूर्ण छ । माङमालुङ समुन्द्री सतहबाट २ हजार १ सय मिटरको उचाईमा पर्दछ । प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण माङमालुङ करिब १५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ ।
कान्छी औंलाले समेत सजिलै हल्लाउन सकिने ढुङ्गा (चक्रशिला) ।
यहाँ यसका साथै विभिन्न आकृतिका ढुङ्गा देख्न पाईन्छ । यी शिला पत्थरमा पनि विभिन्न आकृति प्राकृतिक रुपमा कुँदिएका छन् । यसकारण यो ठाउँलाई प्राकृतिक शिलाहरुको अत्भसत स्थल नै भन्ने गरिएको छ । माङमालुङमा औपचारिक पूजा गर्न थालिएको साढे तीन दशक जति भएको पाईन्छ । यसको उत्पति भने तीन सय वर्ष अघि भएको अनुमान स्थानीय बासिन्दाको छ ।
कसरी पुग्‍ने माङमालुङ ?
माङमालुङ पुग्न इलाम जिल्ला सदरमुकादेखि पैदल हिँडे एक दिन लाग्न सक्छ । सदरमुकामदेखि पाँचथरको सीमावर्ती राँके, घुर्पिसे पञ्चमी, रवी हुँदै र अर्को बाटो इलामकै मंगलबारे, गजुरमुखी, इभाङ हुँदै गाडीबाट पनि पुग्न सकिन्छ । झापाको दमकदेखि गाडी चढे रतुवा खोलको किनारैकिनार त्यसपछि माङसेबुङ भएर तीन घण्डामा माङमालुङ पुग्न सकिन्छ । यो मोटरबाटो निर्माणाधीन दमक रवि सडक (फाल्गुनन्द मार्ग) हो ।
विजुवानीले सात चिरा पारेको विजुवानी ढुङ्गा (थालाचेप्पा)
माङमालुङको हरियाली चियाबारी ।
गजुरमुखी धाम ।